I-Honda iveza iRoboCas, ifriji ezimeleyo enembonakalo yobuhlobo | Iindaba zeGajethi
Inyani yile yokuba amaJapan IHonda ibheja ngamandla kwicandelo lezombane kuzo zonke iimveliso zayo. Kule mihla ukho kwiTokyo Motor Show apho afundisa uluntu kunye noonondaba abakhethekileyo zonke iikhonsepthi zombane asebenze kuzo kule minyaka idlulileyo.
Into yokuqala eya kuthi qatha engqondweni yile Umvundla wegalufa ujonge imoto (Golf MK1) ebeyifundiswe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Nangona kunjalo, ayizizo zonke iimoto esele zisebenza ukusukela oko kuqina kweJapan. Kodwa bafuna ukubonelela ngezisombululo kuwo onke amanqanaba okuhamba. Kwaye yenye yezona zinomdla ibizwa ngokuba yi 'RoboCas', imveliso encinci yokuhamba kombane (Le yindlela ichazwe ngayo yinkampani) ukuba inembonakalo yefriji ephathekayo kodwa inembonakalo yobuhlobo.
Este URoboCas ulandela umgca woyilo lwezinye iimveliso thaca kwiTokyo Motor Show efanayo. Oko kukuthi, imveliso emhlophe, encinci kakhulu kwaye inikezela ngamehlo angaphambili anokuthi akhanyise. Le RoboCas ibonelela ngokugcinwa kwangaphakathi (iilitha zomthamo azichazwanga) kodwa inokusetyenziswa kwiimeko ezahlukeneyo.
Phakathi kokusetyenziswa okunokwenzeka, U-Honda usibonisa iRoboCas njengevenkile eshukumayo esiba yindawo yonke yokutyela. Ngaphakathi unokugcina yonke into oyifunayo kwishishini, ukongeza ekusebenzeni njengomthombo wamandla wokukhanyisa okanye wokupholisa iimveliso.
Ukuqhubeka kumgca wokuvelisa amandla, IiRoboCas zinokusebenza njengomvelisi wamandla ophathwayo Ukujongana nekhonsathi. Izixhobo, izithethi, njl njl zinokufakwa kuyo. Asazi ukuba iRoboCas ineenzwa ezakhelweyo ngaphakathi ukuze zikwazi ukulandela iqabane lakho ngokuzenzekelayo (into leyo IposiBOT ewe iya kuthi kuvavanyo lwayo lokuqala). Nokuba kunjani, okwangoku akukho mhla usondeleyo wokuyifaka kwimveliso, kodwa okungathandabuzekiyo kukuba ezi zoyilo kunye nemibono evela kwaHonda yenza abantu bathethe kweli candelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Honda yazisa iRoboCas, ifriji eneziqu zayo enembonakalo yobuhlobo